Idonsa likaMealy | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Idonsa likaMealy
Izimbangela zokukhula okungenamthetho kwe-clematis nokuqedwa kwazo
Ngokuvamile, ukutshala izitshalo zokuhlobisa, uthemba ukuthi zizoqhakaza futhi zijabulise iso. Kodwa ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi isitshalo siqala ukulimaza. Kulesi simo, ngeke ubone noma iyiphi imifino eluhlaza noma amaqabunga aphilile. Lesi sihloko senzelwe ukusiza i-clematis yakho, eyayihlasela "isifo". Sizohlola ukuthi kungani i-clematis ikhula kabi, okufanele yenzeni uma umuthi usuleleke yizimbungulu, indlela yokuvikela isihlahla kusuka ehlathini nokuningi.
Izifo nezinambuzane ezikhona ze-violets nezindlela zokulwa nazo
Uma okungenani i-violet eyodwa ivela ekhaya lakho, lungela ukuthi izifo nezinhlobo ezahlukene zezinambuzane zizokuhlasela. Kodwa ukugijima kancane, sifuna ukusho ukuthi indlela eyinhloko yokuvimbela lokhu kuyindlela yokuzivikela evamile. Ngakho-ke, ukuthola isitshalo esisha, kufanele sibekwe eceleni kwezinye izitshalo futhi uqinisekise isimo saso esinempilo.
Kungani ungakhuli i-hydrangea, isifo esiyinhloko sembali
Ihlathi elimnandi lama-hydrangea liyakwazi ukuhlobisa noma yiliphi i-cottage noma i-windows sill, kodwa konke lokhu ubuhle ngezinye izikhathi kungasuswa yizifo. Engadini kanye nezifo zezimbali zasendlini azifani neze, ngakho-ke, ngezansi sizofunda ngokuningiliziwe indlela yokuphulukisa i-hydrangea, kungakhathaliseki ukuthi uhlobo luni kanye nendawo yokutshala.
Izici zokutshala nokunakekela ama-daisisi e-cottage yabo yasehlobo
Ama-Daisies ayizimbali ezincane, ukutshala nokukhathalela okwengeziwe, futhi ukukhiqiza akuthathi umzamo omkhulu. Ukuze uzikhulise emhlabathini ovulekile, awudingi ulwazi olukhethekile namakhono, futhi ukuhlukahluka okuhlukahlukene kuzojabulisa ngisho nomcibisholo othakazelisayo kakhulu. Yimaphi ama-daisies athande, izimo ezifanele zokutshala izimbali Uma ungeyena walabo abafuna ukucabangela ama-daisies kuphela ezithombeni, kodwa batshale esivandeni sakho, ngakho-ke kuqala kokunquma endaweni.
Izifo zika utamatisi nezindlela zokubhekana nazo
Kunezinhlobo eziningi zezifo ku-utamatisi. Ulwazi ngabo kuzoba usizo kubo bonke abakhula utamatisi ukuze bathole isivuno esihlwabusayo, esinempilo nesivulekile. Namuhla sibheka izifo ezivame kakhulu zamatamatisi ongase uhlangabezane nazo. Izifo ze-bacterial of utamatisi: izimpawu, izindlela zokulawula Izimbangela zezifo ze-bacteria ku-utamatisi yi-bacteriosis ehlukahlukene, okuholela ekufeni kwezitshalo, ukwehla ekuveleni kwazo kanye nekhwalithi yezithelo zamatamatisi.
Indlela yokususa isikhutha se-powdery ku-ugqumugqumu, susa amabala amhlophe esitshalweni
Ngokuvamile izihlahla ezimbiza izimbali ezikhula endaweni eyodwa isikhathi eside, isikhumba se-powdery ngokushesha sithinta. Akuzona zonke izivande ezizothatha isinqumo sokuqeda isihlahla esinjalo, ikakhulukazi uma kuyinhlobo engavamile futhi enhle kakhulu. Ngakho-ke, umbuzo wangempela wukuthi ungasusa kanjani isikhutha se-powdery. Kunezindlela eziningi ezahlukene zokushaya le fungus.
Indlela yokuphatha nokuvimbela izifo zeklabishi
Zonke izitshalo zensimu, kufaka phakathi iklabishi, zijwayele izifo. Kulula kakhulu ukufeza izinyathelo zokuzivikela ekubhebhethekeni kwabo kunezokwelapha. Ngaphezu kwalokho, ezinye zazo azikwazi ukuphathwa. Izifo ze-bacterial and viral of iklabishi: izimpawu nezindlela zokulawula Zonke izingxenye ezidliwayo zeklabishi zingaphezu komhlaba, ngakho-ke, ukuphatha amakhemikhali anobuthi ukubulala izifo zeklabishi ukulimaza impilo yabo.
Indlela yokuphatha ama-phloxes ekhaya
Phlox - umhlobiso wangempela wanoma iyiphi ingadi. Iphunga elikhanyayo, i-inflorescences ekhanyayo ye-shades ehlukene izojabulisa abanikazi bayo kulo lonke ihlobo. Lezi zimbali azidingi ukunakekelwa okukhethekile baze bagule. Ngeshwa, ama-phlox agula, njengabantu. Futhi akuzona zonke izindlela zokwelashwa (ikakhulukazi uma izimpawu zokuqala zesifo zingabonakali ngesikhathi).
Indlela yokubhekana nezifo ze-pear
Umgomo wabo bonke abalimi kuyisivuno esihle sezithelo. Noma kunjalo, ukuze ukhule kudingeka udinga njalo izihlahla zezithelo, ukubandakanyeka ekuvimbeleni nasekwelapha izifo. Futhi izingozi ezilindele izihlahla ziningi. Ipeyari ingathatha izifo eziningana. Ngemuva kokufunda lesi sihloko, uzofunda ngezifo ezivame ukwedlula zonke ze-pear, ngezindlela zokuvimbela kanye nokwelashwa kwazo.
Indlela yokubhekana nezifo nezinambuzane ze-viola
I-Viola (pansies) - enye yezitshalo ezivame kakhulu emibhedeni yemifula kanye ne-rabatkah, ethandekayo ngabalimi abaningi. Kungokomndeni we-violet. Futhi isetshenziselwa ukuhlobisa i-loggias, ama-balconi, ama-arbors. Uyazi? AmaGreki namaRoma asendulo ahlobisa igumbi nge-viola ngesikhathi samaholide nangamaqembu e-dinner.
Indlela yokwelapha izihlahla ze-apula ezifweni, izindlela eziphumelelayo
Ukukhula kwezihlahla ze-apula ezweni kunzima kakhulu kunokuba kungabonakala ekuqaleni. Ukuze uhlale uvunwa kahle, kubalulekile ukunakekela izihlahla zezithelo, ukwazi izifo ezisemqoka zezihlahla ze-apula kanye nokwelashwa kwazo. Kuqondene nezifo ze-apula, amaqabunga azo nezindlela zokwelashwa kuzoxoxwa kulokhu okushiwo. Uyazi?
Indlela yokubhekana nezifo ze-peach
Uma insimu yakho yezithelo yamapayipi inqoba izifo ezihlukahlukene, ungaphelelwa ithemba futhi uqede isivuno. Izifo eziningi akunzima kakhulu ukunqoba. Kufanele uzibophe ngesineke, izincomo ezivela kubalimi abanolwazi kanye nemikhiqizo yokulawula izifo ezingathengwa kalula esitolo esithile esiseduze.
Izinambuzane ezinkulu nezifo ze-ithanga
Ithanga sibheka imifino enombala okhanyayo we-orange. Lesi sitshalo sivela eNingizimu Melika, nakuba ezweni lethu, kuye ngokuthi izimo zokulima nokuhlukahluka, izithelo zempukane zingafinyelela ku-1 m ububanzi, zibe nesisindo esingaphezu kuka-200 kilogram. Imbewu ye-pulp ngisho namathambo idliwe njengokudla, kodwa isikhumba semifino sinokuphonswa ngaphandle, ngoba sinzima kakhulu, sinzima futhi singenasidingo.
Izindlela zokulawula izifo zeDill
I-Dill iyisitshalo saminyaka yonke kuze kube yi-125 cm high, isitshalo singenalutho, amaqabunga amancane ahamba phambili, izimbali eziphuzi zenza isambulela esiyinkimbinkimbi, ukuvuna, ifomu izithelo eziluhlaza obomvu - imbewu. I-Dill iyisitshalo esingenakuzithoba, kodwa ngokuvamile isithinteka yizifo ezihlukahlukene ezivimbela umlimi ukuba athole isivuno esihle semifino enomsindo.
Indlela yokubhekana nezifo zesithombo
Isidalwa sisho izitshalo zokuvuthwa zakuqala ezingathinteki izifo. Noma kunjalo, kusengenzeka. Ukulima kanye nokulima ngendlela efanele kuzokugwema iningi labo. Kulesi sihloko sizokhuluma ngezibonakaliso nezindlela zokulwa nezifo zesithombo. Le yemifino ingakwazi ukunqoba kokubili amagciwane kanye nesifungulu se-pathogenic.
Izifo ezijwayelekile zemilenze nezinambuzane kanye nokulawula kwabo okusebenzayo
Endle, kunezinhlobo ezingaba ngu-600 ze-willows. Ziza ngesimo sezihlahla nezihlahla, ezide futhi ezide, ezinemibala ehlukahlukene yamaqabunga nombala wamagxolo. Esimweni, kunezinhlobonhlobo nezinhlobonhlobo eziningi. Futhi bonke bangasongelwa yizibalo eziningi zezifo nezinambuzane. Mayelana neyingozi kakhulu kubo uzofunda kulokhu kulesi sihloko.
Okufanele ukwenze uma amaconsi anamathele avela e-orchid
Noma yisiphi isilimu, ukushintsha ukubukeka kwezimbali ezikhulile kuyisizathu esiyinhloko sokucabanga ngempilo yabo. Ngendlela efanayo ne-orchid, amaconsi amathele avela emaqabunga - sibheka ngokushesha imbangela. Kumele kuqashelwe ukuthi lesi senzakalo asikhombisi isidingo sokuphatha lesi sitshalo, kodwa lokhu kungenzeka akunakwenzeka.
Indlela yokubhekana ne-powdery isikhutha ku-roses
Umama we-Mealy ungenye yezifo ezivame kakhulu futhi ezingavamile ukuthi inani elikhulu lezitshalo lihlushwa. Kubalulekile ukulwa nalokhu, ngoba umphumela wesifo esingahoxiswa ukufa kwesitshalo. Okungajabulisi lapho lesi sifo sibhubhisa ubuhle bezitshalo zokuhlobisa. Kulesi sihloko sifuna ukwabelana ngezincomo zendlela yokuvimbela isikhutha se-powdery ku-roses nokuthi kufanele senzeni uma sithinta izimbali.
Indlela yokubhekana ne-powdery isikhutha ezitshalweni zasendlini
Iphunga likaMealy (kanye nomlotha, ilineni) yisifo esivamile futhi esiyingozi esivela ezitshalweni zasendlini nangaphandle futhi kudinga ukwelashwa okusheshayo. Yini eyingozi nokuthi i-Mildew ivela kuphi iyingozi ezitshalweni hhayi nje ngokulahlekelwa ukukhangisa kwazo okuhlobisa, kodwa futhi ngokubonakala kwalesi sifo, isitshalo sishiya izakhi, izinqubo ze-photosynthesis, ukuphefumula nokuqhuma kuphazamiseka.